Phantse wonke umzali uyazi malunga neenzuzo zokuqina. Kule nqaku ndifuna ukunitshela ngeendlela ezithile, ukuze ukhethe okusemgangathweni kwintsana yakho. Kuthe malunga nokushisa, iimpahla kunye nokuhamba.
Iqondo lokushisa lomoya kwigumbi apho umntwana elitholakala khona libekwe ngabanye. Kungcono ukuzama indawo epholileyo, enokuhluka ukusuka kuma-degrees ukuya kuma-22, ngelixa umgangatho womntwana kunye neengubo zakhe zizo zonke izizathu.
Umoya omtsha kufuneka uhlale ungena kwigumbi. Kwixesha elifudumeleyo, iifestile zinokugcinwa zivule ngokupheleleyo, kwiindawo ezibandayo - i-ajar okanye iwindi evulekileyo. Kukho nawuphi na, kungakhathaliseki ukuba yiyiphi indlela oyithandayo, amaxesha amaninzi ngeli gumbi kufuneka lugxininiswe ngokukhawuleza. Ngoko, umzekelo, kwixesha elibandayo igumbi linomoya ongaphantsi kwamahlanu ngelilanga ngemizuzu eyi-10-15. Eyona nto ifanelekileyo ukulungelelanisa. Umntwana ukhutshwa ngaphandle kwegumbi. Ngexesha lokulala ngenxa yokuqhuma, ukushisa kwemoya kwinqanaba lezityalo kunganciphisa ukuya kuma-18-20 degrees.
Khetha izicathulo zakho eziphathekayo ezifanelekileyo, ezifanelekileyo kwimozulu, akulula, kodwa kuza namava. Ungagxininisa kwezi zinto zilandelayo: gqoba iimfesane zentsana kwelinye icebo ngaphezu kokuba uzithatha.
Akuyiyo yonke imbuzi eyenza abazali bakhe bacacise ukuba ngexesha lokuhamba kushushu okanye kubanda, ngoko kufuneka uhlolisise wena. Jonga ukushisa kwe-spout yakhe, ipenki, imilenze, umbala wesikhumba. Jonga indlela yakhe yokuziphatha xa uhlala esitrato, kwaye ugcine umkhondo wakhe xa ebuyela ekhaya. Ngoko unokuqinisekisa ukukhuphazeka komntwana wakho kwaye ulondoloze ukhuseleko lwakhe kumgangatho ofanelekileyo.
Ehlobo, umntwana uqala ukuhamba emva kokukhulelwa esibhedlele. Ukuhamba kokuqala kungadlulisa imizuzu engama-30, kwaye yongeza imihla ngemizuzu eyi-10-15. Ngomoya omtsha umntwana kufuneka abe ubuncinane iiyure ezimbini ngosuku. Ehlobo bahamba ngokukhethekileyo.
Kwixesha elibandayo, baqhubeka ngokukhawuleza emoyeni obandayo. Emva kokukhutshwa, umntwana usenziwa kuphela kwigumbi lokuphuza umoya okanye kwibhashini. Emva kweveki enye okanye ezimbini, unokwenza uququze uhambo olufutshane. Ngexesha elifanayo, ukushisa kwomoya kwisitrato somntwana oneminyaka engama-ezimbini ubudala kufuneka kube nama-degrees angama-25, kwiinyanga ezintathu-ezine, ubuncinane ubuncinane bama-degrees angama-20, kumntwana oneminyaka emihlanu ukuya kweyeshumi elinambini, ubuncinane ubuncinane bee-degrees ezili-15. njengoko izinto zingakhokelela ekupholiseni umzimba womntwana.
Kwimozulu ebanda, oomama bakhetha ukwenza uhambo olufutshane olufutshane kunolunye olude. Musa ukulibala ukucoca ubuso bomntwana ngekhilimu ekhuselekileyo.
Ukuhamba, ngokuqinisekileyo, kulandela ukukhanya kwemini. Ilanga livuselela ukuveliswa kwe-vitamin D elukhumbeni lomntwana, okuthintela ukuphuhliswa kwee-rickets, ngoko i-top of the stroller ayivaliwe. Musa ukuzikhawulela ukuhamba ebhaleni. Ingubo, ingilazi kunye ne-polyethylene ultraviolet ayidlulanga. Kubushushu bezulu, ubuso bomntwana abuvaliwe, kodwa apha kubalulekile ukulandelelana ngoko ukuba intloko yentsana iphezulu kwengubo.
Inhalation kubantwana abanokukhwehlela
Izizathu kunye nemeko yokugqithisa kwabantwana
Iimfihlelo zokukhwabanisa kwabasetyhini
Indlela yokupheka ikhekhe kwipani yokupanda?
Izizathu ezi-3 zokuthenga izibhakabusi ebusika kwaye uzigqoke rhoqo!